Halatra Finday Avy eny Anosy ireo mpanao sintomahery eny Ankazomanga
Roa lahy tratran'ny polisin'ny csp6 nanendaka finday teny amin'ny faritra Ankazomanga ny zoma 24 janoary 2020 tokony ho tamin’ny 12ora sy 10 mn atoandro.
Vehivavy iray 17 taona sy lehilahy iray 19 taona no lasibatr'ireto jiolahy ireto tamin’ity fotoana ity. Niantso vonjy izy ireo ka rehefa nifanenjehana dia tratra ihany ka mbola hita teny aminy ihany koa ny findain’ireo olona vao avy nendahiny. Efa tafaverina amin’ny tompony moa izany entana izany. Fa nandritra ny fisavana natao azy 2 lahy ireto dia mbola nahitana finday roa hafa tany amin'izy ireo izay nafeniny. Nilaza ho avy eny Anosy izy roa lahy ireto no manafika eny Ankazomanga ary izao voasambotry ny polisy eo am-panaovana asa ratsy izao. Mirongatra be ny halatra finday tato ho ato nefa tsy azo antoka ho araka ireny fa vitsy ireo olom-pirenena no hahafantatra ny famantarana manokanana code emei.